Labo kooxood oo ka dheela Premier League oo qorsheynaya inay dalab qaali ah ka gudbiyaan xiddiga Real Madrid ee Isco - Hargeele - Wararka Somali State
(Madrid) 15 Feb 2020. Sida wararku ay sheegayaan labo ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ayaa doonaya inay dalab qaali ah ka gudbiyaan Naadiga Real Madrid ee Isco.
Kooxaha Arsenal iyo Chelsea ayaa la sheegayaa inay adduun dhan 63 milyan oo gini ugu dhaqaaqayaan kubbad-sameeyaha Real Madrid ee Isco.
Inkastoo uu xiddiga reer Spain si aad ah ugu sii biirayo kooxda koowaad ama safka hore ee Los Blancos xilli ciyaareedkan, haddana taasi ma aysan joojin wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka 27-sano jirkaan.
Manchester City ayaa sidoo kale la la xiriirinayey saxiixa xiddigan Isco muddooyinkii la soo dhaafay, laakiin Warsidaha El Desmarque ayaa soo jeedinaya in kooxaha Gunners iyo The Blues ay diyaar u yihiin inay soo qaataan.
Labada macallin Mikel Arteta iyo Tababare Frank Lampard ayaa doonaya inay safafkooda xoojiyeen iyadoo Chelsea ay horay gacanta ugu dhigtay Hakim Ziyech.
Marka loo eego baahida ay u qabaan inay lacag ku raadiyaan ciyaartoy cusub, Los Blancos ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay inay ku damaashaaddo dalabyo u imaanaya xiddigaheeda, waxaana ay Isco ku bedelan kartaa adduun dhan 63 milyan oo gini.
Isco ayaa gacan ka geystay kaliya hal gool 17 kulan oo horyaalka La Liga iyo Champions League uu ciyaaray xilli ciyaareedkan.
Bihi,Farmajo meeting to feature in Ethiopia PMs Talks